Aqoonkaab Hababkan raac si aad uga hortagno cudurka Kansarka | Aqoonkaab
Hababkan raac si aad uga hortagno cudurka Kansarka
Jun 07, 2016Caafimaadka
Sida cilmi baadhayaashu sheegayaan suurto gal maaha in cudurkan lagaga hortago sida cudurada badankooda looga hortago ee tallaalku ugu muhiimsan yahay.
laakiin waxa jira habab dabeeciya oo lagu yarayn karo fursad cudurkani kugu haleeli karo waxaana kamida hababkan .
1.Jooji cabista sigaarka : cabista sigaarka walow hal sigaar ah oo aad cabto waxa uu kordhinaya fursada cudurkani kugu haleeli karo gaar ahaan kanserka sambabada ,kaadihaysta,cunaha ,afka iyo kalyaha , sidaasi daraadeed joojinta sigaarku waa hab aad ku yarayn karto khatarta kanserka .
2. iska ilaali buurnida ama cayilka : cayilka ama buurnida qofka waa qofka oo miisaankisu aad u kordho waxaanay horumarinaysa noocyo ka mida unugyada keena cudurkan kanserka .
3. ka digtoonow inaad cunada ku karsato weel duug ah ama dhaawac soo gaadhay : haddii guriga kuu yaalaan weel wax lagu karsado oo dhaawacan si degdeg ah u bedel waayo waxa uu siyaadiyaa khatarta uu kugu haleeli karo cudurkan kanserka , weelka dhawaacan oo dillaacsan waxay ku jirta maadaada aashitada ee PFOA (perflurooctanic Acid ) kaas oo koriya unugyada kanserka .
4. iska ilaali falaadhaha cadceeda waqtiyada kuleylka : inkasta oo falaadaha cadceeda yihiin il qani ku ah fitamin D da hadana falaadhaha cadceeda xilliyada kuleylka waxay siyaadisaa kanserka haraga inuu ku haleelo . dhakhtaradu waxay ku taliyaan in la marsado kariimada difaaca falaadhaha cadceeda iyo in la xidho dhar celin kara qoraxda sidoo kale inaan la socon waqtiyada duhurki ee qoraxdu kulushahay .
5. cun khudaar ta :cunista khudaarto waxay muhiim u tahay ka hortaga kanserka waxaana muhiima in noocyada kala duwan khudaarta kolba la kala bedelo ,laakin waxa inay khudaarto nadiif ahaato isla markaana aad dhaqdo ka hor intaanad cunin.
6. samee socod joogta : guud ahaan socodku waxa uu leeyahay faaidooyin caafimaad oo tiro badan waxaana ka mida inuu ka hortag u yahay cudurkan kanserka
halkan ka akhriso faaidooyinka caafimaad ee socodka \_
7. iska ilaali cabista Alkoosha (Alcohol) : diinteena sharafta iyadoo ilaalinaysa caafimaad qofka muslimka ah waxay inaga mamnoocday cabista khamriga iyo wixii ka samaysan aalkool , khamrigu waxa uu sababaa noocyo badan oo kamida noocyada kanserka .
8. naftaada sii waqti nasasho : cadaadiska howlaha maalinta dhan guud ahaan uma fiicna caafimaadka howlaha badan iyo nasasho la’aantu waxay daciifiyaan habdhiska difaaca qofka kaas oo sababi karta in qofk uu haleelo cuduro badan oo ay ka mid yihiin cudurkan kanserka .
9.yaree ku hadalka teleefanka:marka aad qof wacayso iyo marka aad la hadlayso taleefanku waxa uu soo daayaa shucaac kaas oo burburin kara unugyada maskaxda ,aakhirkana waxa uu sababi kara kanserka maskaxda , dhakhtaradu waxay ku taliyaan in waqti yar oo kooban lagu hadlo taleefanka ama lagu hadlo xadhkaha dhagaha (earphones) kuwaas oo ah kuwa nabadgelyo badan.
10. si joogta isu baadh : haddii aad dareento xanuun ka dhayal san dhakhtarkaaga la xidhiidh shaybaad samee .
11. biyo badan cab :noole oo dhami kama maarmo cabitaanka biyaha ,biyahu waxay leeyihiin mucjisooyin caafimaad oo tiro badan , waqtiyada cuntada ha illaawin inaad cabto biyaha .
dhamaantood hababkan waa laga hortegi karaa cudurka kanserka
Previous PostFree download AVG 2016 Internet Security Business Edition Next PostSababaha keena guusha dardaaranki cumar bin khadaab (RC)